Nnwom 148 NA-TWI - Biribiara nkamfo Onyankopɔn - Kamfo - Bible Gateway
Nnwom 147Nnwom 149
Nnwom 148 Nkwa Asem (NA-TWI)
148 Kamfo Awurade! Mo a mote ɔsorosoro, monkamfo Awurade mfi soro! 2 N’abɔfo ne ne soro asafodɔm nyinaa, monkamfo Awurade. 3 Kamfo no, owia ne ɔsram; kamfo no, nsoromma a mohyerɛn. 4 Kamfo no, ɔsorosoro ne nsu a ɛboro wim so.